IXiaomi Mi 9 Pro 5G kunye neMi MIX 4 iya kuba ne5G | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IXiaomi Mi 9 Pro 5G kunye neMi MIX 4 iya kuba ne5G
IXiaomi yenye yeemveliso esele zinefowuni ye-5G kwintengiso, iMi MIX 3 5G. Nangona inkampani kungekudala iza kusishiya nayo iimodeli ezimbini ezintsha ezine5G. Baya kuba yi-Mi MIX 4, efika oku kuwa kwintengiso kunye neMi 9 Pro 5G, ukuba uphawu sele lubhengeziwe ngocingo olukhawulezayo olungenazingcingo kule veki iphelileyo ngokusesikweni.
Iifowuni ezimbini ezintsha ukwenzela ukuba uphawu luzakwandisa ngokucacileyo uluhlu lweefowuni nge5G, icandelo elikhulayo eliza kuthengisa ngakumbi nangakumbi. Kwakukho amarhe malunga nale modeli, kodwa ngoku i-Xiaomi Mi 9 Pro 5G kunye neMi MIX 4 ziboniswa kwiwebhusayithi yazo njengeefowuni ze5G.
Ezi ziifowuni ezimbini eziza kuphehlelelwa ngaphakathi kwinqanaba eliphezulu lophawu lwaseTshayina. IXiaomi Mi 9 Pro 5G kulindeleke Sebenzisa iprosesa ye-Snapdragon 855 Plus, I-12 GB ye-RAM kunye ne-512 GB yokugcina. Ngelixa ibhetri yayo iya kuba nomthamo we-4.000 mAh, kufuneka inike ukuzimela okuhle.
Malunga neMi MIX 4 kukho amarhe amaninzi kwezi veki, Kukho intetho yekhamera ye-100 MP kwifowuni, njengokuba besesitshilo. Iya kusebenzisa iprosesa efanayo nenye imodeli, ikwayi-12 GB ye-RAM. Ifowuni enamandla kakhulu ngale ndlela, eya kuthi isinike ukusebenza okuhle.
Zombini iifowuni zinjaloe kufuneka abekhona ekupheleni kwale nyanga, njengoko uXiaomi watsho. Ngapha koko, iMi MIX 4 iya kuziswa ngokusesikweni kuyo Kwangolo suku MIUI 11 izakwenziwa. Nangona le ayisiyonto eqinisekiswe ngokusesikweni yinkampani kumajelo eendaba, ke kufuneka silinde ukuze sazi ngakumbi.
Isiphelo esiphakamileyo esiza kusinika ngokuqinisekileyo Kuninzi esinokukuthetha kwicandelo leefowuni ze5G. Kuba baqinisekile ukugcina ixabiso elisezantsi kunabaninzi abakhuphisana nabo kweli candelo, njengesiqhelo kwiXiaomi. Siza kunika ingqalelo kwinkcazo-ntetho yayo esemthethweni kule nyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 9 Pro 5G kunye neMi MIX 4 iya kuba ne5G
IVivo Nex 3 ifotwe ngescreen sayo esilahlayo: uyilo lwayo lonke lubhenciwe
IXiaomi Mi 9T izakuhlaziya kwi-Android 10 ngo-Okthobha